RASMI: Real Madrid iyo Juventus oo si wadajir ah u gaaray Final-ka Champions League. Cardiff waa la isku hayaa. - Hablaha Media Network
RASMI: Real Madrid iyo Juventus oo si wadajir ah u gaaray Final-ka Champions League. Cardiff waa la isku hayaa.
HMN:- Real Madrid ayaa dhameystirtay labada kooxood ee wada ciyaari doona final-ka kadib markii ay 4-2 isku cel-celis ahaan kaga gudbeen Atletico Madrid.
Juventus ayaa xalay soo gaartay final-ka tartanka oo ka dhici doona magaalada Cardiff ee gobolka Wales markii ay 4-1 kaga soo baxeen kooxda faransiiska ah ee As Monaco.
Waa xaqiiq Real Madrid iyo Juventus ayaa isku wajahi doona final-ka ka dhici doona 3-da June Cardiff, waana markii labaad oo ay isku wajahi doonaan kama dambeysta tartankaan 20-kii sano ee ugu dambeeyay.
Real Madrid waxey u socotaa iney koobka difaacato markii ugu horeysay, bals Juve waxey isha ku heysaa iney midkeedii labaad tan iyo markii magacaan la bixiyay qaado iyo markii sadexaad wadarta guud halka Real ay qudheeda dooneyso markii 12-aad.